Diyo post :: दृष्टिविहिनको आवाज: शारीरिक दुर्वलता भएकाहरुको योग्यता र क्षमताको कदर सरकारले गर्नुपर्छ ! दृष्टिविहिनको आवाज: शारीरिक दुर्वलता भएकाहरुको योग्यता र क्षमताको कदर सरकारले गर्नुपर्छ ! - Diyo post
दृष्टिविहिनको आवाज: शारीरिक दुर्वलता भएकाहरुको योग्यता र क्षमताको कदर सरकारले गर्नुपर्छ !
काठमाडौं, २९ जेठ । नेपाल दृष्टिविहिन अपाङ्ग जागरण संघर्ष समितिले आफूहरुलाई माग्ने भन्ने मन्त्री नै आँफै माग्ने भएको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि समितिले कला र गला बेचेर गुजारा चलाउने आफूहरुलाई माग्ने भन्दै पशुपतिनाथ र बौद्धबाट मन्त्रीले हटाएकाप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। पशुपति परिसरमा कला र गला प्रस्तुत गर्दै आएको तर पशुपति विकाष कोष र महानगरीय प्रहरी मिलेर आफ्ना बाध्यवादनका सामाग्री खोसिएकोमा उनीहरुको आक्रोश थियो ।
उनले भने,‘हामीले बाँच्ने आधार बनाउन आफ्नो कला बेच्न पनि पाएनौँ । हाम्रा सामान लुटे, हामीलाई जबरजस्ती हातपात गरि लखेटियो,यो अत्यन्तै खेदजनक छ ।’राज्यले आफूहरुको योग्यता र क्षमताको कदर नगरेको समितिको आरोप छ । आफ्ना मागहरु प्रधानमन्त्रीसमक्ष पु¥याउन रिपोटर्स क्लबका सभापति एवम् बरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलालाई उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
त्यसैगरि संघर्ष समितीका उपाध्यक्ष्य दिपराज परियारले राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अपहेलना गरेको भन्दै आफूले भोगेको पीडा सुनाए ।
त्यसैगरि संघर्ष समितिका सदस्य नेत्रप्रसाद कोइरालाले पनि राज्यले अपाङ्ता भएको व्यक्तिलाई हेर्ने अंग नभएको जानकारी गराए । उनले भने‘ राज्यले कहिल्यैपनि हाम्रो माग सूनिदिएन ।’
त्यस्तै उनले आफूहरुले गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी मागेको बताए । उनले भने,‘तर राज्यले हाम्रा मागहरुलाई वास्ता गरेन । हामी राज्यको कुन अंग हो । हामी राज्यको नागरिक हो कि होइन ? सडक चोक, मन्दिरमा गाएर पेट पाल्दा पनि लखेटियौँ ।’